‘रामकहानी’ को ट्रेलर सार्वजनिकमा पत्रकारको प्रश्नमा किन कड्किए सुदर्शन र पूजा ?(भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘रामकहानी’ को ट्रेलर सार्वजनिकमा पत्रकारको प्रश्नमा किन कड्किए सुदर्शन र पूजा ?(भिडियो)
August 2, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
सुदर्शन थापा निर्देशित निकै प्रतिक्षित फिल्म ‘रामकहानी’ को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा फिल्म निर्माण टिमदेखि बहुसंख्यक कलाकारको उपस्थिति रहेको थियो । रोमान्टिक कथामा आधारित तथा कमेडी जनरामा निर्माण भएको उक्त फिल्ममा धेरै जसो हाँस्य कलाकारिताको पृष्ठभूमी भएका कलाकारहरुको उल्लेख्य सहभागीता रहेको छ । माग्नेबुढा, तक्मे बुढा, जितु नेपाल, राजाराम पौडेलदेखि रविन्द्र झा सम्मका कलाकारले ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा हँसाउनु हँसाएका थिए ।
पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाले ले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेको यो फिल्म उनै थापाको निर्देशनमा निर्माण भएको हो । ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारले निर्देशक थापा तथा नायिका शर्माको बिषयलाई लिएर प्रश्न सोधेपछि दुबैजना कड्किएका थिए । नायिका शर्माले सुदर्शनसँग काम गर्न पाउदा निकै प्राउड फिल हुने बताईन् । त्यति मात्रै होईन सुदर्शनले बनाएको फिल्म ‘ह्या’ भन्ने खालको नहुने प्रष्ट पारिन् ।